Paradise Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island Soo Noqoshada Guusha La Sheegay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Paradise Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island Soo Noqoshada Guusha La Sheegay
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Ka dib 16 bilood oo hakad ah, Khadka Bahamas Paradise Cruise Line ayaa dhowaan raacay rakaabkeedii ugu horreeyay ee Palm Beach, Florida, iyo, iyadoo sannad-guuradii koowaad ee hawlgalku si dhakhso leh u soo dhowaaday, adeegga ayaa loogu dhawaaqaa guul.
Dalabyada xagaaga gaarka ah ee jiga ugu sarreeya ee jasiiradda ayaa kor u qaadaya dadka soo booqda.
Markabka calanka leh ee ay qoysku leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan, Grand Classica, ayaa ka shiraacday Dekedda Palm Beach July 24 -keedii.
Waxay gaartay Jasiiradda Grand Bahama bishii Luulyo 25-keedii oo calaamad u ah soo-noqoshada khadadka caanka ah ee laba-habeen ee fasaxyada dalxiiska.
Ian Rolle, Guddoomiyaha, Golaha Dalxiiska ee Jasiiradda Grand Bahama ayaa u nisbeeya qaar ka mid ah guusha badeecadda ay bixiyeen la -hawlgalayaasheenna, Viva Wyndham Fortuna Beach iyo Grand Lucayan. "Hadda oo markii ay dib u bilaabatay khadkii dalxiiska, socdaalayaashu waxay dareemayaan kalsooni dheeraad ah waxayna ku faraxsan yihiin fursadda ay ugu laaban karaan Bahamas iyo Viva Wyndham Fortuna Beach iyo Grand Lucayan waxay keenayaan runtii 'micro-cation' runtii." "Borotokoollada jira si loo hubiyo jawiga ugu nabdoon ee suurtogalka ah ee rakaabka" ayuu sii raaciyay.
Marco Gobbi, Viva Wyndham Fortuna Beach Resort, Meshell Britton, Guddiga Dalxiiska Grand Bahama Island, Chrisanne Aston, Udgoonka Bahamas
Francis Riley, oo ah Sarkaalka Ganacsiga ee khadka socdaalka ayaa isku raacay; “Dhammaan shaqaaluhu 100% waa la tallaalay laakiin waxaan hadda aqbalnaa martida la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin labadaba. Taasi waxay tidhi, waxaan raacaynaa borotokoollo adag oo ku saabsan tijaabinta hore ka hor inta aan la gelin iyo raacitaanka talooyinka CDC si loo hubiyo khibrad badbaado leh, oo nadiif ah. Marka la eego, maaskaro waa in lagu xidhaa dhammaan aagagga gudaha ee markabka, marka laga reebo marka martidu wax cunayso ama cabayso. Maaskaro looma baahna meelaha bannaanka ah sida sagxadda barkadda, cuntada dibadda, baararka, iwm, ”ayuu yidhi.
Si loo hubiyo caafimaadka iyo badbaadada dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha, Bahamas Paradise Cruise Line waxay hirgelisay hab -maamuusyo nadaafadeed oo ballaaran, waxayna u hoggaansan tahay dhammaan siyaasadaha la tilmaamay oo ay u baahan tahay Qaab -dhismeedka CDC ee Amarka Iibinta Shuruudaysan. Sida laga soo xigtay agaasimaha guud Oneil Khosa, “martida saaran doonta hadda waxay ku raaxeysan karaan fasax nadiif ah, aamin ah, raaxo leh, oo u dhow guriga Bahamas, oo leh jadwal dhammaystiran oo dib-u-socod ah laba habeen oo safar wareeg ah.
Intii uu hakadku ku jiray, barnaamijyo tababar gaar ah ayaa ay bixisay Waaxda Tababarka Warshadaha ee Wasaaradda Bahamas ee Dalxiiska, shaqaalaha hoteelka Frontline, Darawalada Taksiilayaasha, iyo sidoo kale daneeyayaasha kale ee dalxiiska, iyagoo hubinaya u hoggaansanaanta caafimaadka & badbaadada booqdaha. Iyada oo la filaayo soo noqoshada khadadka safarka, guryaha xubnaha ka ah Guddiga Dalxiiska Grand Bahama Island ayaa siiya dalabyo booqdayaasha iman kara.
Mr. Marco Gobbi, Maareeyaha Guud ee Dalxiiska Xeebta Viva Wyndham Fortuna, ayaa yiri, “Waan ku faraxsanahay soo noqoshada lamaanahan muhiimka ah. Waxaan aragnay kororka baakadaha Day-pass-ka ah, degganaanshaheena sidoo kale wuu kordhay,-ku dhawaad ​​10% sababta oo ah barnaamijka, 'Cruise and Stay.' Tani waxay gacan weyn ka geysatay ganacsigeena oo la halgamayay sidii loo sii haysan lahaa deggenaan macquul ah. Waxay la mid tahay (neefsashada) hawo nadiif ah oo soo gasho! ” Gobbi wuxuu sii raaciyay, “Waxaan rajeyneynaa in Grand Classica ay si dhaqso ah ugu soo laaban doonto heerarkii ganacsi ee ka horeeyey covid-ka, taasoo noo oggolaaneysa inaan gaarno heer jaale oo gaar ah, taasi waxay naga caawin doontaa inaan furnaanno xilliga hoose ee soo socda (Sebtember ilaa Diseembar). ”
Gacanta si loo sii wanaajiyo waayo -aragnimada soo -dhaweynta dib -u -soo -dhoweynta ee booqdayaasha, Guddiga Dalxiiska ee Grand Bahama Island waxay iskaashi la sameeyeen Udgoonka Bahamas - Warshadda Barafuunka si ay u soo saarto gacmo nadiifiye gacmeed loogu talagalay martida imaanaysa. Sanitizer -ka buufiyo jeermis -dilaha wuxuu ka kooban yahay 75% aalkolo, si wax -ku -ool ah u nadiifiyo meelaha maqaarka wuxuuna dilaa 99.9% jeermisyada. Nadiifiyaha waa 20ml / 0.68 fl. oz oo buufinaysa, oo leh saxeex kulaylaha kulaylaha ah iyo qaabka kaarka deynta ee khafiifka ah, oo loogu talagalay inay si raaxo leh ugu habboon tahay jeebkaaga dambe.
Socotada suurtagalka ah waxaa lagu dhiirigelinayaa inay soo booqdaan websaydhka Cruise Line si ay u maraan hababka maraakiibta iyo inay u ballansadaan safarkooda Jasiiradda Grand Bahama.
https://www.bahamasparadisecruise.com/sailing-procedures.php Dalabyo iyo dalacaadyo kala duwan oo kala duwan ayaa sidoo kale hadda la heli karaa. Wixii macluumaad ah ama si aad u ballansato safar, booqo www.BahamasParadiseCruise.com/. La soco Bahamas Paradise Cruise Line on Facebook at Facebook.com/BPCruiseLine, Instagram @BahamasParadiseCruiseLine, iyo Twitter @BPCruiseLine.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan safarka jasiiradda Grand Bahama, booqo www.grandbahamavacations.com .
Ku saabsan Guddiga Dalxiiska Jasiiradda Grand Bahama
Guddiga Dalxiiska ee Jasiiradda Grand Bahama (GBITB) waa wakaaladda suuq -geynta iyo dallacaadda ee gaarka loo leeyahay Jasiiradda Grand Bahama. GBITB waxaa loo xilsaaray inay taageerto kobaca dhaqaalaha ee daneeyayaasha dalxiiska ee Jasiiradda Grand Bahama.
Waxqabadyada waxaa ka mid ah horumarinta iyo fulinta suuq-geynta kala duwan iyo dadaallada dhiirrigelinta ee loogu talagalay in lagu wanaajiyo lana kordhiyo wacyiga jasiiradda Grand Bahama iyo muuqaalka suuqa. Xubnaha Gudiga waxaa ka mid ah ganacsiyo badan oo la xiriira dalxiiska oo ay ku jiraan waaxda hoyga, maqaayadaha, baararka, meelaha soojiidashada, bixiyeyaasha gaadiidka, farshaxanleyda iyo dukaamada.